Dowladda Somaliya oo Codsatay in laga Taageero Dhismaha Ciidamada – Radio Daljir
Dowladda Somaliya oo Codsatay in laga Taageero Dhismaha Ciidamada
Oktoobar 3, 2015 6:19 b 0
Sabti, Oktoobar 03, 2015 (Daljir) —Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa sheegay in xukuumadda uu hogaamiyo ay diyaar u tahay sidii ay beesha caalamka ula kaashan lahayd dhismaha ciidmaada qalabka sida ee Soomaaliya.
Cumar Cabdirashiid Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in taageerada beesha caalamka ee dhismaha ciidan qaran ay tahay mid lagama maarmaan ah, wuxuuna xusay in dhibka haysta ciidamada ay xilligana tahay inaysan haysan xeryo iyo hub ku filan.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in hadii ciidamadu aysan lahayn xeryo ay ku tababartaan oo leh qalabkii loogu talagalay ay ku adagtahay inay dalka usoo baxaan, wuxuuna codsaday in laga taageero sidii ay ciidanku u heli lahaayeen xeryo casri ah.
Hadalkaan kasoo yeeray ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilligaan kusugan magaalada New York ayaa kusoo beegmaya xilli ay xukuumadda Soomaaliya wado qorshe laysugu dhafayo ciidamada dalka, oo dhowaan ka bilowday magaalada Kismaayo.
Tacsi loo Dirayo Dr. Maxamed Xasan Siciid oo Sweden ku Geeriyooday